Musqulaha Maskaxda Cadaadiska Maqaarka Cadaadiska Maskaxda Jidhka Cufka Maskaxda
$ 14.70 qiimaha joogtada ah $ 23.73
Anti-Cellulite Muscle Pain Relief Roller Ball Body Relax Massage Glove - Blue gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Number Model: Xirfadlaha Jidh-dhiska Maskaxda
Waxyaabaha: PVC jilicsan, bir ah
Rugta Kubadda Koleyga: 9
Color: buluug, guduud, casaan
Waxay kor u qaadi kartaa wareegga dhiigga Dib u hagaajin oo hagaajiya indhaha, ka hortagga cudurada qoorta iyo dawakh.
Waxay ka caawisaa in laga saaro daalku, yareeyo miisaanka, jirka ku dheji, dhaqdhaqaaq oo qurxin maqaarka.
9 qaybaha isku dhejinta, 360-shahaadada bedbeddelka, ku duub barta jirkaada, riixid murqaha xanuunka.
Waxaa loo isticmaalaa in lagu dhajiyo qodobbada saxda ah ee jirka.
Dib-u-soo-kabashada iyo dib-u-dhac waqti kasta, gaar ahaan daawashada TV-ga ama qaadashada qubeyska iyo wixii la mid ah.
Naqshadaynta qiyaasta yar waxay kuu ogolaaneysaa inaad duugo meel kasta iyo waqti kasta.
Qeybta sheyga waxaa laga sameeyey burushyada jilicsan ee PVC, waxay sidoo kale duugi kartaa jirkaada inta aad qubeysaneysid ama qubeyska.
Naqshadeynta Ergonomiga waxay ku habboon tahay qiyaasta gacanta.
Ku habboon qaybaha jirka oo ay ka mid yihiin gacmaha, garbaha, lugaha iyo dhabarka, barida, iwm.
1 x Dhexdhexaadiyaha Body Massager
Fiiro gaar ah: Sababtoo ah farqiga u dhexeeya ilaaliyeyaasha kala duwan, sawirka ma laga yaabaa inuu ka tarjumo midabka dhabta ah ee shayga. Waxaan dammaanad qaadnaa qaabka la mid ah sida muuqata sawirada. Iyadoo loo eegayo qiyaasta buuggan iyo qaababka qiyaasaha kala duwan, fadlan u oggolow in ay iska dhiciso 1-3cm.
Wixii warar ah ee ku saabsan riwaayada, jimicsiga
все хорошо ... Wlaakada caadiga ah .. Shlo 2. Sampagh
otimo produto, dib-u-soo-celinta, iyo khudradda diimeed (62 dias).
yimid waqti fiican. jecel sheyga. waxaan jeclaan lahaa inaan amro 2